အသက် ၂၄ နှစ်မှာ မင်းသားရဲ့ကြင်ယာတော်ဖြစ်မယ့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး အသက် ၂၅နှစ်မှာ ဘုရင်မဖြစ်မယ့်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့သူ – Sannla
အသက် ၂၄ နှစ်မှာ မင်းသားရဲ့ကြင်ယာတော်ဖြစ်မယ့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး အသက် ၂၅နှစ်မှာ ဘုရင်မဖြစ်မယ့်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့သူ
February 28, 2018 CdJHfSNabKzVRyFBnz Uncategorized 0
တရုတ်မင်းသမီး Fan Bing Bing ရဲ့ နာမည်ကြီးစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။
“သူဋ္ဌေးတွေကို ငါမယူ၊ ငါကိုယ်တိုင်သူဋ္ဌေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်”
ဒီလိုစကားကနားထောင်ရတာ အထက်စီးဆန်ပြီး ကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့။ ဒီကနေ့မှာ အဲဒီစကားထက် အထက်စီးဆန်တဲ့ အသွင်တူအဆိုတစ်ခုရှိလာခဲ့တယ်။
ဒီစကားကို Emma Watson ကပြောခဲ့တယ်။
Emma Watsonဆိုတဲ့နာမည်က လူတွေနဲ့နည်းနည်းစိမ်းနေသလိုပါပဲ။ ဒါကလည်း “ဟယ်ရီပေါ်တာ” ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဒီကလေးမကို ငယ်ငယ်လေးတည်းက Hermione ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ လူတွေသိထားခဲ့ကြလို့ဖြစ်တယ်။
Hermione အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ချိန်မှာ အယ်မာဟာ ၉နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူဟာ Hermione နဲ့ တစ်ပုံစံတည်းလို့ သူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီသရုပ်ဆောင်နေရာမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ သူအစားမထိုးနိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ သူဟာ ၈ ကြိမ်မြောက်အင်တာဗျူးပြီးမှ ဒီဇာတ်ကောင်မှာသရုပ်ဆောင်ဖို့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ သူဟာ တည်ကြည်လေးနက်တယ်၊ ထက်မြက်တယ်၊ အတန်းထဲမှာ စာတော်တဲ့ကလေးဖြစ်တယ်။ လူချစ်လူခင်ပေါများတယ်။ ဒါဟာ Hermione တဖြစ်လဲ အယ်မာလေးရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝဖြစ်တယ်။
အဲဒီတုန်းက အယ်မာဟာ လူတွေမှတ်မိလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်မရှိသေးဘူး။ သူဟာ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲက Hermione ဆိုပေမယ့် လူတကာရဲ့စွဲမက်ခြင်းကို မခံရသေးဘူး။ သူဟာ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်အတူရိုက်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တိတ်တိတ်ခိုးချစ်နေပြီး ထုတ်မပြောရဲတဲ့ ကလေးမလေးဖြစ်တယ်။
သူဟာ ငယ်ငယ်တုန်းကအတန်းထဲမှာ စာတော်တဲ့အတန်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လို “ငါစာတော်တယ်၊ ဆရာဆရာမ ငါ့ကိုချစ်တယ်”ဆိုတဲ့မာနမျိုးနဲ့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မာန်တစ်မျိုးရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မင်းသားလာကယ်မှလွတ်မြောက်မယ့် မယ်မဒီလေးအဖြစ် သူဘယ်တော့မှမစောင့်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပင်ကိုအားနဲ့ မင်းသမီးဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်၈ကားမှာပါခဲ့တဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မှဲ့ခြောက်တွေ၊ မညီညာတဲ့သွားတွေနဲ့ ကလေးမလေးဟာ ကျွန်မတို့မျက်စိရှေ့မှာတင် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ မိန်းမချောမိန်းမလှလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မင်းသားကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးနိုင်တဲ့ အလှနတ်ဘုရားမဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကော်ဇောနီပေါ်လမ်းလေးလျှောက် လက်မှတ်ထိုးပေးရုံနဲ့တင် သူ့ပရိသတ်တွေကို ရူးရူးသွပ် သည်းသည်းလှုပ်စေခဲ့တယ်။
မင်းသားကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားက နောက်ပြောင်ပြောဆိုတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တမ်းမှာလည်း အယ်မာဟာ မင်းသားနဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်…
အင်္ဂလန်အိမ်ရှေ့မင်းသား ဟယ်ရီ (ဟုတ်ပါတယ်.. အိမ်ရှေ့မင်းသားဝီလျံရဲ့ညီတော်ပါ)က အယ်မာကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ အင်္ဂလန်သတင်းထောက်တွေ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေကလည်း အယ်မာဟာ မင်းသမီးလုပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလူဖြစ်တယ်။ မင်းသားနဲ့မြန်မြန်ချစ်ကြိုက်စေချင်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီသတင်းကို အယ်မာက “မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့လက်ထပ်စရာမလိုပါဘူး” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
ကြည့်ရတာ “အလှဆုံးကြင်ယာတော်”ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အယ်မာစိတ်ကူးခဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ Emma Watson ဆိုတဲ့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပဲ ရာဇဝင်တွင်ရစ်ဖို့ သူပိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
အောင်မြင်တဲ့လမ်းမပေါ် အယ်မာလျှောက်လှမ်းနေပါတယ်။ ရက်စက်ရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာ ပရိသတ်အနှစ်သက်ဆုံး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးမှာ အယ်မာပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထက်မြက်ခြင်းနဲ့လှပခြင်းပေါင်းစပ်ထားသူအဖြစ် လူတွေတင်စားခဲ့ကြတယ်။ ကလေးသရုပ်ဆောင်ကနေ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အထိ အယ်မာလျှောက်တဲ့လမ်းဟာ ဖြောင့်ဖြူးနေသလိုပါပဲ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ သူဟာ သူ့နဲ့ရွယ်တူသူတွေထက် ပိုရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။
၉နှစ်အရွယ်တည်းက သူဟာ ကလေးဘဝကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ နေ့တိုင်း မနက် ၆နာရီမှာ ရိုက်ကွင်းသွား ည ၉နာရီပြန်တဲ့အလုပ်ဟာ သူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကလေးတိုင်းတပ်မက်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်ကိုသူရခဲ့ပြီး “ဟယ်ရီပေါ်တာ”ဇာတ်ကားမှာ ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ နာမည်ရအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သာမန်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သရုပ်ဆောင်နေရုံပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဇာတ်ကားထဲအတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတချို့ဟာ ပညာရေးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ချိန် အယ်မာကတော့ ဘာသာရပ်တိုင်း Aရတဲ့ ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။
“Dan.Rupert နဲ့ ကျွန်မ ဒီဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခံရပြီးချိန်မှာ “အိုး.. .ဘုရားရေ.. သူတို့က ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေ.. သူတို့ရဲ့ဘဝက ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားမှာ” ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့မျက်ဝန်းမျိုးက ကျွန်မတို့အပေါ် အမြဲလွှမ်းခြုံနေခဲ့တယ်။
ငယ်ငယ်လေးနဲ့နာမည်ရအောင်မြင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို လူတိုင်းကြိုမြင်နေကြသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အယ်မာက လူတွေမျှော်လင့်တဲ့မျက်ဝန်းကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်၃ခုရဲ့ ကျောင်းတက်ခွင့်အကြောင်းကြားစာကို ရခဲ့တယ်။ အဲဒီကျောင်းထဲမှာ အော်စဖို့တက္ကသိုလ်လည်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Brown တက္ကသိုလ်ကို သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
“ငါဘယ်သူလဲဆိုတာ တခြားလူဆုံးဖြတ်ပေးတာကို ငါမလိုချင်ဘူး။ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာ ငါ့ကိုယ်ငါပဲဆုံးဖြတ်ချင်တယ်”
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားမှာ အတူဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေက အယ်မာကိုအမြဲချီးကျူးခဲ့ကြတယ်။ ဇာတ်ကားသုံးကားရိုက်နေတာတောင် အယ်မာဟာကျောင်းစာမှာ A ၉ခုအရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သင်ယူမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကခက်တယ်။ အယ်မာလို တစ်ဘက်မှာဇာတ်ကားရိုက်ရင်း၊ အဘက်ဘက်ကလာတဲ့ ဖိအားတွေကို တောင့်ခံရင်း၊ သတင်းထောက်တွေရဲ့လိုက်လံသတင်းယူမှုကို ရှောင်ဖယ်နေရသူက ပိုဆိုးပါတယ်။
“မိန်းကလေးဖြစ်ရင် အယ်မာလိုရှင်သန်သင့်တယ်။ သူဟာ နတ်သမီးလေးလိုလှတယ်၊ သင်ယူမှုမှာ ထူးချွန်တယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားတယ်”
အယ်မာမှာ ရယူသင့်တာကို ရယူ၊ စွန့်လွှတ်သင့်တာကို စွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်ကိုလုပ်ဖို့ သူနားလည်တယ်။ ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်မှာ တခြားကလေးသရုပ်ဆောင်လို ကျောင်းပညာရေးကို သူလက်မလွှတ်ခဲ့ဘူး။
တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဘယ်ဇာတ်ကားမှ လက်ခံရိုက်ကူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူကြေညာခဲ့တယ်။ တကယ်လည်း “ဟယ်ရီပေါ်တာ” ဇာတ်ကား စီးရီးလိုက်ရိုက်ကူးပြီးဆုံးချိန်မှာ တခြားကားတွေ သူလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ်တက်ချိန်မှာ သူဟာ တခြားကျောင်းသားတွေလို သာမန်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခံစားနေတာလို့ သူကဆိုခဲ့တယ်။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော… တက္ကသိုလ်ကိုသူ ၅နှစ်တက်လိုက်ရပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို လက်လွတ်ပြီး ကျောင်းပညာရေးမှာ သူအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ “Hermione” ဘဝနဲ့ပဲ သူရဲ့ဘဝပြီးဆုံးသွားမှာကို မလိုလားလို့ဖြစ်တယ်။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို သူနှစ်သက်တယ်… ဒါပေမယ့် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မိန်းမလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သူပိုလိုလားခဲ့တယ်။
“ကိုယ်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာသိတယ်၊ ဦးတည်ရာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလည်း သိတယ်ဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး အဲဒီရည်မှန်းချက်ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ရတယ်”
အယ်မာက မွေးရာပါချောမောလှပသူတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ သူရဲ့မညီညာတဲ့သွားတွေကို ကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့ဖူးကြမှာပေါ့။ ရှုပ်ပွဖောင်းကားနေတဲ့ ဆံပင်၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု မသပ်ရပ်တဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အယ်မာဟာ အခုချိန်မှာ “အလှနတ်သမီး” တဆူဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ အယ်မာရဲ့အင်အား၊ အယ်မာရဲ့ကြိုးစားမှုတွေပဲဖြစ်တယ်။
“ကျွန်မမှာ လှပတဲ့သွားတွေမရှိပါဘူး၊ ပြီးတော့ သေးသွယ်လှပတဲ့ မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဘယ်လိုပဲနေနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းမြင်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလွယ်တကူမပြောင်းလဲတတ်သူအဖြစ်ပဲ ကျွန်မလုပ်ချင်ပါတယ်”
အင်္ဂလန်ကအသစ်ထွက်တဲ့ Street shooting အလှနတ်သမီး ၁ဝဦးထဲမှာ အယ်မာလည်းတစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူဟာ ခြေသလုံးသွယ်လျသူမဟုတ်ဘူး၊ အရပ်မြင့်သူမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသူမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကော်ဇောနီလမ်းလျှောက်ချိန်မှာ ပရိသတ်ရဲ့အကြည့်ကို ညှို့ငင်ဖမ်းစားထားနိုင်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူဟာ ပရဟိတပွဲတွေ၊ ရုပ်ရှင်ပွဲတွေ၊ နာမည်ကျော်တံဆိပ်ဖက်ရှင်ပွဲတွေရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကို အမြဲခံရသူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရောင်စုံမီးရောင်တွေလင်းလက်တဲ့ အနုပညာဘဝအပြင် သူရဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်မှု၊ သူရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိမှုတွေက ပရိသတ်တွေကို ပိုသိမ်းပိုက်ကြီးစိုးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကကျင်းပတဲ့ He for She လှုပ်ရှားမှုမှာ သူပါဝင်ခဲ့တယ်။ “ကုလသမဂ္ဂချစ်ကြည်မှုသံတမန်” (Goodwill Ambassador) အဖြစ် သူခန့်အပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီသတင်းကို အယ်မာကြေညာတဲ့ညနေခင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်မှာ အယ်မာပရိသတ်တွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားခဲ့တယ်။ အယ်မာက သူရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကို သိတယ်။ အဲဒီသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဒီလောကအတွက် သူဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲမျှော်လင့်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
အယ်မာဟာ မွေးဖွားလာကတည်းက မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေ ကွာရှင်းခဲ့ကြတယ်။ သူဟာ သူ့ဖခင်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက သူတို့ စီးပွားရေးအရမ်းကြပ်တည်းခဲ့တာတောင် သူ့ဖခင်က သူ့ကို ကျောင်းဆက်ထားခဲ့တယ်။ ကျောင်းလခက သူ့ဖခင်တတ်နိုင်တာထက် ကျော်လွန်ခဲ့လည်း သူ့ကို မရရအောင် ကျောင်းထားခဲ့တယ်။
“အဲဒီတုန်းက သူတကယ်ပိုက်ဆံမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီကျောင်းမှာ ကျွန်မနေ့ရက်တိုင်း အရမ်းကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်”
(At that time, he just didn’t have the money. And so I have worked hard every single day that I was at that school.)
သူကြိုးစားပြီး သင်ယူခဲ့တယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့မှာ အရာရာအားလုံးကို သူပိုင်ဆိုင်နေခဲ့တာတောင် သူကြိုးစားနေဆဲဖြစ်တယ်။
“ကျွန်မမှာ အလုပ်မလုပ်လည်း ဒီတစ်သက်သုံးမကုန်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အလုပ်လုပ်ချင်နေပါသေးတယ်”။ သူအရမ်းကြိုးစားခဲ့လို့ အခုချိန်မှာ သူဟာ အင်အားသိပ်စိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။
လူတချို့က မင်းသားရဲ့အချစ်ကိုမရခင်ကတည်းက လှပပြည့်စုံတဲ့မိဖုရားလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်မာကတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ မတင်းတိမ်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ကုလသမဂ္ဂမှာပါဝင်တယ်၊ အကောင်းဆုံးနာမည်ကျော်ကြားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူ ဇာတ်ကားရိုက်တယ်။ အဲဒီအပြင် ဂီတသဘင်တစ်ခုမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး သူ့ရဲ့အဆိုအကအရည်အချင်းကို သူကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ခဲ့တယ်။ အရာတော်တော်များများကို သူမြည်းစမ်းခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့လည်း ချိန်းတွေ့ကြည့်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ မင်းသားရဲ့ကြင်ယာတော်အစား ကိုယ်တိုင်ဘုရင်မလုပ်တာကမှ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကို သူသိလိုက်ပါတယ်။
အယ်မာပရိတ်သတ်တွေအတွက် နိုင်းနိုင်းစနေမှ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
Creidt:NineNineSaNay (Aug. 20. 2016)
အသကျ ၂၄ နှဈမှာ မငျးသားရဲ့ကွငျယာတျောဖွဈမယျ့အရေးကို စှနျ့လှတျပွီး အသကျ ၂၅နှဈမှာ ဘုရငျမဖွဈမယျ့လမျးကိုလြှောကျခဲ့သူ
တရုတျမငျးသမီး Fan Bing Bing ရဲ့ နာမညျကွီးစကားတဈခှနျးရှိတယျ။
“သူဋ်ေဌးတှကေို ငါမယူ၊ ငါကိုယျတိုငျသူဋ်ေဌးဖွဈအောငျလုပျမယျ”
ဒီလိုစကားကနားထောငျရတာ အထကျစီးဆနျပွီး ကွီးကယျြလိုကျတဲ့ပုံစံပေါ့။ ဒီကနမှေ့ာ အဲဒီစကားထကျ အထကျစီးဆနျတဲ့ အသှငျတူအဆိုတဈခုရှိလာခဲ့တယျ။
ဒီစကားကို Emma Watson ကပွောခဲ့တယျ။
Emma Watsonဆိုတဲ့နာမညျက လူတှနေဲ့နညျးနညျးစိမျးနသေလိုပါပဲ။ ဒါကလညျး “ဟယျရီပျေါတာ” ရုပျရှငျတှထေဲမှာ ဒီကလေးမကို ငယျငယျလေးတညျးက Hermione ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ လူတှသေိထားခဲ့ကွလို့ဖွဈတယျ။
Hermione အဖွဈ သရုပျဆောငျခြိနျမှာ အယျမာဟာ ၉နှဈအရှယျပဲရှိသေးတယျ။ သူဟာ Hermione နဲ့ တဈပုံစံတညျးလို့ သူ့ကိုယျသူပွောခဲ့တယျ။ အဲဒီသရုပျဆောငျနရောမှာ ဘယျသူ့ကိုမှ သူအစားမထိုးနိုငျဖွဈခဲ့တယျ။ တကယျတမျးမှာတော့ သူဟာ ၈ ကွိမျမွောကျအငျတာဗြူးပွီးမှ ဒီဇာတျကောငျမှာသရုပျဆောငျဖို့ ရှေးခယျြခံခဲ့ရတာဖွဈတယျ။ သူဟာ တညျကွညျလေးနကျတယျ၊ ထကျမွကျတယျ၊ အတနျးထဲမှာ စာတျောတဲ့ကလေးဖွဈတယျ။ လူခဈြလူခငျပေါမြားတယျ။ ဒါဟာ Hermione တဖွဈလဲ အယျမာလေးရဲ့ငယျစဉျဘဝဖွဈတယျ။
အဲဒီတုနျးက အယျမာဟာ လူတှမှေတျမိလောကျတဲ့ ရုပျရညျမရှိသေးဘူး။ သူဟာ ကလေးသူငယျတှရေဲ့စိတျကူးအိပျမကျထဲက Hermione ဆိုပမေယျ့ လူတကာရဲ့စှဲမကျခွငျးကို မခံရသေးဘူး။ သူဟာ သာမနျမိနျးကလေးတဈယောကျပဲဖွဈသေးတယျ။ ပွီးတော့ ရုပျရှငျအတူရိုကျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျကို တိတျတိတျခိုးခဈြနပွေီး ထုတျမပွောရဲတဲ့ ကလေးမလေးဖွဈတယျ။
သူဟာ ငယျငယျတုနျးကအတနျးထဲမှာ စာတျောတဲ့အတနျးခေါငျးဆောငျတဈယောကျလို “ငါစာတျောတယျ၊ ဆရာဆရာမ ငါ့ကိုခဈြတယျ”ဆိုတဲ့မာနမြိုးနဲ့ အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ မာနျတဈမြိုးရှိခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး မငျးသားလာကယျမှလှတျမွောကျမယျ့ မယျမဒီလေးအဖွဈ သူဘယျတော့မှမစောငျ့ခဲ့ဘူး။ ကိုယျကိုယျတိုငျ ပငျကိုအားနဲ့ မငျးသမီးဖွဈစခေဲ့တယျ။
ဟယျရီပျေါတာရုပျရှငျ၈ကားမှာပါခဲ့တဲ့ မကျြနှာပျေါမှာ မှဲ့ခွောကျတှေ၊ မညီညာတဲ့သှားတှနေဲ့ ကလေးမလေးဟာ ကြှနျမတို့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျတဲ့ မိနျးမခြောမိနျးမလှလေးတဈဦးဖွဈလာခဲ့တယျ။ မငျးသားကို သိမျးပိုကျစိုးမိုးနိုငျတဲ့ အလှနတျဘုရားမဖွဈလာခဲ့တယျ။ ကျောဇောနီပျေါလမျးလေးလြှောကျ လကျမှတျထိုးပေးရုံနဲ့တငျ သူ့ပရိသတျတှကေို ရူးရူးသှပျ သညျးသညျးလှုပျစခေဲ့တယျ။
မငျးသားကို သိမျးပိုကျစိုးမိုးနိုငျတယျဆိုတဲ့စကားက နောကျပွောငျပွောဆိုတဲ့စကားတော့မဟုတျဘူး။ တကယျတမျးမှာလညျး အယျမာဟာ မငျးသားနဲ့ခြိနျးတှခေဲ့ဖူးတယျ…
အင်ျဂလနျအိမျရှမေ့ငျးသား ဟယျရီ (ဟုတျပါတယျ.. အိမျရှမေ့ငျးသားဝီလြံရဲ့ညီတျောပါ)က အယျမာကို ခဈြခှငျ့ပနျခဲ့ဖူးတယျလို့ အင်ျဂလနျသတငျးထောကျတှေ ဖျောပွခဲ့ဖူးတယျ။ အဲဒီတုနျးက အင်ျဂလနျပရိသတျတှကေလညျး အယျမာဟာ မငျးသမီးလုပျဖို့ အသငျ့တျောဆုံးလူဖွဈတယျ။ မငျးသားနဲ့မွနျမွနျခဈြကွိုကျစခေငျြခဲ့ကွတယျ။
အဲဒီသတငျးကို အယျမာက “မငျးသမီးဖွဈဖို့ အိမျရှမေ့ငျးသားနဲ့လကျထပျစရာမလိုပါဘူး” လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
ကွညျ့ရတာ “အလှဆုံးကွငျယာတျော”ဆိုတဲ့ဂုဏျပုဒျနဲ့ ဒဏ်ဍာရီတဈခုဖွဈဖို့ အယျမာစိတျကူးခဲ့ပုံမပျေါဘူး။ Emma Watson ဆိုတဲ့ ကိုယျ့နာမညျနဲ့ပဲ ရာဇဝငျတှငျရဈဖို့ သူပိုမြှျောလငျ့ခဲ့တယျ။
အောငျမွငျတဲ့လမျးမပျေါ အယျမာလြှောကျလှမျးနပေါတယျ။ ရကျစကျရှုပျထှေးတဲ့စဈတမျးကောကျယူမှုမှာ ပရိသတျအနှဈသကျဆုံး သရုပျဆောငျတဈဦးမှာ အယျမာပါဝငျနခေဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ထကျမွကျခွငျးနဲ့လှပခွငျးပေါငျးစပျထားသူအဖွဈ လူတှတေငျစားခဲ့ကွတယျ။ ကလေးသရုပျဆောငျကနေ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးဖွဈတဲ့အထိ အယျမာလြှောကျတဲ့လမျးဟာ ဖွောငျ့ဖွူးနသေလိုပါပဲ။ တကယျတမျးမှာတော့ သူဟာ သူ့နဲ့ရှယျတူသူတှထေကျ ပိုရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။
၉နှဈအရှယျတညျးက သူဟာ ကလေးဘဝကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယျ။ နတေို့ငျး မနကျ ၆နာရီမှာ ရိုကျကှငျးသှား ည ၉နာရီပွနျတဲ့အလုပျဟာ သူရဲ့နစေ့ဉျဘဝဖွဈခဲ့တယျ။
ကလေးတိုငျးတပျမကျတဲ့ ဇာတျဆောငျကိုသူရခဲ့ပွီး “ဟယျရီပျေါတာ”ဇာတျကားမှာ ဝငျရောကျသရုပျဆောငျခဲ့တယျ။ နာမညျရအောငျမွငျခဲ့တယျ။ သာမနျအားဖွငျ့ပွောရရငျတော့ သရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈ သူပြျောပြျောရှငျရှငျသရုပျဆောငျနရေုံပါပဲ။ ရုပျရှငျရိုကျဖို့ ဇာတျကားထဲအတူပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူတခြို့ဟာ ပညာရေးကို လကျလှတျဆုံးရှုံးလိုကျခြိနျ အယျမာကတော့ ဘာသာရပျတိုငျး Aရတဲ့ ထူးခြှနျတဲ့ကြောငျးသားဖွဈအောငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတောငျးဆိုနခေဲ့ပါတယျ။
“Dan.Rupert နဲ့ ကြှနျမ ဒီဇာတျကောငျကိုရှေးခယျြခံရပွီးခြိနျမှာ “အိုး.. .ဘုရားရေ.. သူတို့က ကလေးသရုပျဆောငျတှေ.. သူတို့ရဲ့ဘဝက ဒီလိုနဲ့ပဲပွီးသှားမှာ” ဆိုတဲ့ လူတှရေဲ့မကျြဝနျးမြိုးက ကြှနျမတို့အပျေါ အမွဲလှမျးခွုံနခေဲ့တယျ။
ငယျငယျလေးနဲ့နာမညျရအောငျမွငျတဲ့ကလေးတှရေဲ့ အနာဂတျကို လူတိုငျးကွိုမွငျနကွေသလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အယျမာက လူတှမြှေျောလငျ့တဲ့မကျြဝနျးကို ဆနျ့ကငျြခဲ့တယျ။ သူဟာ နာမညျကွီးတက်ကသိုလျ၃ခုရဲ့ ကြောငျးတကျခှငျ့အကွောငျးကွားစာကို ရခဲ့တယျ။ အဲဒီကြောငျးထဲမှာ အျောစဖို့တက်ကသိုလျလညျးပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ Brown တက်ကသိုလျကို သူရှေးခယျြခဲ့တယျ။
“ငါဘယျသူလဲဆိုတာ တခွားလူဆုံးဖွတျပေးတာကို ငါမလိုခငျြဘူး။ ငါဘယျသူလဲဆိုတာ ငါ့ကိုယျငါပဲဆုံးဖွတျခငျြတယျ”
ဟယျရီပျေါတာဇာတျကားမှာ အတူဝငျရောကျသရုပျဆောငျခဲ့သူတှကေ အယျမာကိုအမွဲခြီးကြူးခဲ့ကွတယျ။ ဇာတျကားသုံးကားရိုကျနတောတောငျ အယျမာဟာကြောငျးစာမှာ A ၉ခုအရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ထူးခြှနျထကျမွကျတဲ့သငျယူမှုကို ထိနျးသိမျးဖို့ကခကျတယျ။ အယျမာလို တဈဘကျမှာဇာတျကားရိုကျရငျး၊ အဘကျဘကျကလာတဲ့ ဖိအားတှကေို တောငျ့ခံရငျး၊ သတငျးထောကျတှရေဲ့လိုကျလံသတငျးယူမှုကို ရှောငျဖယျနရေသူက ပိုဆိုးပါတယျ။
“မိနျးကလေးဖွဈရငျ အယျမာလိုရှငျသနျသငျ့တယျ။ သူဟာ နတျသမီးလေးလိုလှတယျ၊ သငျယူမှုမှာ ထူးခြှနျတယျ၊ အလုပျကွိုးစားတယျ”
အယျမာမှာ ရယူသငျ့တာကို ရယူ၊ စှနျ့လှတျသငျ့တာကို စှနျ့လှတျနိုငျတဲ့ ထကျမွကျတဲ့အသိဉာဏျရှိတယျ။ မှနျကနျတဲ့အခြိနျမှာ မှနျကနျတဲ့အလုပျလုပျကိုလုပျဖို့ သူနားလညျတယျ။ ကြောငျးတကျတဲ့အရှယျမှာ တခွားကလေးသရုပျဆောငျလို ကြောငျးပညာရေးကို သူလကျမလှတျခဲ့ဘူး။
တက်ကသိုလျတကျနစေဉျအတှငျးမှာ ဘယျဇာတျကားမှ လကျခံရိုကျကူးမှာမဟုတျဘူးလို့ သူကွညောခဲ့တယျ။ တကယျလညျး “ဟယျရီပျေါတာ” ဇာတျကား စီးရီးလိုကျရိုကျကူးပွီးဆုံးခြိနျမှာ တခွားကားတှေ သူလကျမခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တက်ကသိုလျတကျခြိနျမှာ သူဟာ တခွားကြောငျးသားတှလေို သာမနျကြောငျးသားတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဆယျကြျောသကျဘဝကို သူပြျောပြျောရှငျရှငျခံစားနတောလို့ သူကဆိုခဲ့တယျ။
ဘယျလိုပဲပွောပွော… တက်ကသိုလျကိုသူ ၅နှဈတကျလိုကျရပါတယျ။ အောငျမွငျကြျောကွားမှုကို လကျလှတျပွီး ကြောငျးပညာရေးမှာ သူအာရုံစိုကျခဲ့တယျ။ ဒါဟာ “Hermione” ဘဝနဲ့ပဲ သူရဲ့ဘဝပွီးဆုံးသှားမှာကို မလိုလားလို့ဖွဈတယျ။ သရုပျဆောငျအလုပျကို သူနှဈသကျတယျ… ဒါပမေယျ့ ထူးခြှနျထကျမွကျတဲ့မိနျးမလေးတဈယောကျအဖွဈ သူပိုလိုလားခဲ့တယျ။
“ကိုယျဘာလိုခငျြသလဲဆိုတာသိတယျ၊ ဦးတညျရာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကိုလညျး သိတယျဆိုရငျ အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားပွီး အဲဒီရညျမှနျးခကျြဖွဈမွောကျအောငျ အကောငျအထညျဖျောရတယျ”
အယျမာက မှေးရာပါခြောမောလှပသူတဈဦးမဟုတျပါဘူး။ သူရဲ့မညီညာတဲ့သှားတှကေို ကြှနျမတို့တှခေဲ့ဖူးကွမှာပေါ့။ ရှုပျပှဖောငျးကားနတေဲ့ ဆံပငျ၊ ဝတျစားဆငျယငျမှု မသပျရပျတဲ့ငယျဘဝနဲ့ကွီးပွငျးလာခဲ့တဲ့ အယျမာဟာ အခုခြိနျမှာ “အလှနတျသမီး” တဆူဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာ အယျမာရဲ့အငျအား၊ အယျမာရဲ့ကွိုးစားမှုတှပေဲဖွဈတယျ။
“ကြှနျမမှာ လှပတဲ့သှားတှမေရှိပါဘူး၊ ပွီးတော့ သေးသှယျလှပတဲ့ မိနျးကလေးလညျးမဟုတျဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျဘယျလိုပဲနနေေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနှဈသကျတဲ့၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အကောငျးမွငျတဲ့၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလှယျတကူမပွောငျးလဲတတျသူအဖွဈပဲ ကြှနျမလုပျခငျြပါတယျ”
အင်ျဂလနျကအသဈထှကျတဲ့ Street shooting အလှနတျသမီး ၁ဝဦးထဲမှာ အယျမာလညျးတဈဦးအပါအဝငျဖွဈခဲ့တယျ။
သူဟာ ခွသေလုံးသှယျလသြူမဟုတျဘူး၊ အရပျမွငျ့သူမဟုတျဘူး၊ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျဆှဲဆောငျမှုရှိသူမဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကျောဇောနီလမျးလြှောကျခြိနျမှာ ပရိသတျရဲ့အကွညျ့ကို ညှို့ငငျဖမျးစားထားနိုငျသူဖွဈခဲ့တယျ။
သူဟာ ပရဟိတပှဲတှေ၊ ရုပျရှငျပှဲတှေ၊ နာမညျကြျောတံဆိပျဖကျရှငျပှဲတှရေဲ့ ဖိတျကွားမှုကို အမွဲခံရသူဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရောငျစုံမီးရောငျတှလေငျးလကျတဲ့ အနုပညာဘဝအပွငျ သူရဲ့ ထူးခြှနျထကျမွကျမှု၊ သူရဲ့ပငျကိုယျစှမျးရညျရှိမှုတှကေ ပရိသတျတှကေို ပိုသိမျးပိုကျကွီးစိုးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကုလသမဂ်ဂကကငျြးပတဲ့ He for She လှုပျရှားမှုမှာ သူပါဝငျခဲ့တယျ။ “ကုလသမဂ်ဂခဈြကွညျမှုသံတမနျ” (Goodwill Ambassador) အဖွဈ သူခနျ့အပျခံခဲ့ရတယျ။ ဒီသတငျးကို အယျမာကွညောတဲ့ညနခေငျးမှာ ကုလသမဂ်ဂရဲ့အငျတာနကျဝကျဆိုကျမှာ အယျမာပရိသတျတှေ ကွိတျကွိတျတိုးစညျကားခဲ့တယျ။ အယျမာက သူရဲ့သွဇာလှမျးမိုးနိုငျစှမျးကို သိတယျ။ အဲဒီသွဇာလှမျးမိုးနိုငျစှမျးကို အသုံးပွုပွီး ဒီလောကအတှကျ သူဘာတှလေုပျပေးနိုငျမလဲဆိုတာကို အမွဲမြှျောလငျ့ခဲ့သူဖွဈတယျ။
အယျမာဟာ မှေးဖှားလာကတညျးက မငျးသမီးဖွဈခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ သူ ငယျရှယျစဉျကတညျးက မိဘတှေ ကှာရှငျးခဲ့ကွတယျ။ သူဟာ သူ့ဖခငျနဲ့အတူနထေိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒီတုနျးက သူတို့ စီးပှားရေးအရမျးကွပျတညျးခဲ့တာတောငျ သူ့ဖခငျက သူ့ကို ကြောငျးဆကျထားခဲ့တယျ။ ကြောငျးလခက သူ့ဖခငျတတျနိုငျတာထကျ ကြျောလှနျခဲ့လညျး သူ့ကို မရရအောငျ ကြောငျးထားခဲ့တယျ။
“အဲဒီတုနျးက သူတကယျပိုကျဆံမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီကြောငျးမှာ ကြှနျမနရေ့ကျတိုငျး အရမျးကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ”
သူကွိုးစားပွီး သငျယူခဲ့တယျ၊ အလုပျကွိုးစားခဲ့တယျ။ ဒီကနမှေ့ာ အရာရာအားလုံးကို သူပိုငျဆိုငျနခေဲ့တာတောငျ သူကွိုးစားနဆေဲဖွဈတယျ။
“ကြှနျမမှာ အလုပျမလုပျလညျး ဒီတဈသကျသုံးမကုနျတဲ့ ပိုကျဆံတှရှေိနပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ အလုပျလုပျခငျြနပေါသေးတယျ”။ သူအရမျးကွိုးစားခဲ့လို့ အခုခြိနျမှာ သူဟာ အငျအားသိပျစိုကျထုတျစရာမလိုဘဲ အောငျမွငျကြျောကွားနခေဲ့တာဖွဈတယျ။
လူတခြို့က မငျးသားရဲ့အခဈြကိုမရခငျကတညျးက လှပပွညျ့စုံတဲ့မိဖုရားလုပျဖို့ ပွငျဆငျနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အယျမာကတော့ ဒီလောကျနဲ့ပဲ မတငျးတိမျခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ကုလသမဂ်ဂမှာပါဝငျတယျ၊ အကောငျးဆုံးနာမညျကြျောကွားတဲ့သရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူ ဇာတျကားရိုကျတယျ။ အဲဒီအပွငျ ဂီတသဘငျတဈခုမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျပွီး သူ့ရဲ့အဆိုအကအရညျအခငျြးကို သူကိုယျတိုငျဆနျးစဈခဲ့တယျ။ အရာတျောတျောမြားမြားကို သူမွညျးစမျးခဲ့တယျ။ အိမျရှမေ့ငျးသားနဲ့လညျး ခြိနျးတှကွေ့ညျ့ခဲ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာတော့ မငျးသားရဲ့ကွငျယာတျောအစား ကိုယျတိုငျဘုရငျမလုပျတာကမှ ပိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးတယျဆိုတာကို သူသိလိုကျပါတယျ။
အယျမာပရိတျသတျတှအေတှကျ နိုငျးနိုငျးစနမှေ ဘာသာပွနျမြှဝပေါတယျ။
​အောက်ပါအချက်တွေထဲက ၅ ချက်နဲ့ ငြိသွားရင်တော့ဖြင့် သင်လည်းအသက်ကြီးသွားပြီ။
ဟင်းချိုမှုန့်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် ကြက်သားမှုန့်ကလည်း စိတ်မချရဘူး.. ကန်စွန်းဥနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဟင်းခတ်မှုန့်လုပ် နိုင်ပြီ..။